6 mikana yebhizinesi pamusika weSpanish wemusika | Ehupfumi Zvemari
Kunyangwe iko kusahadzika kwakanyanya mumisika yemabhizimusi yeSpanish, hapana mubvunzo kuti mikana yebhizinesi inoramba iripo panguva ino. Iko kusarudzika indekisi yemusika wemusika wenyika, iyo Ibex 35, iri kunetseka kugara pamusoro pematanho e9.000 euros. Icho chiratidzo chekuyera chakasiyana kubva kudowndrend kubva kune yakasarudzika mamiriro uye kuti ingave iri nguva yekubuda kana kupinda mumisika yemari. Naizvozvo, iyo ndeimwe yematanho akakosha ekushanduka kwemari dzeSpain.
Mune ino mamiriro akajairika, imwe yemaitiro iwe aunofanirwa kuisa mune ako ekukurumidza mari. Saka kuti iwe uri mune yakakwana mamiriro monetize mari ine zvivimbiso zvakakura zvekubudirira, kunova pakupera kwezuva izvo zvazviri. Kubudikidza nenhevedzano yemaitiro anoratidza yakanakisa hunyanzvi chimiro uye izvo zvinogona kuvatorera kumusoro mukuenderana kwemitengo yavo. Kunze kwemamwe marudzi ehunyanzvi kutarisisa uye zvakare kubva pakuona kwezvakakosha.
Izvi zvirevo izvo, mune dzimwe nguva, zvine mikana yekuwongorora pamusoro pegumi. Kubva pamatanho azvino mune akatorwa anogona kuwanikwa zvinonakidza zvinodzoka kune vashoma uye vepakati varimi. Kunze kwekuti zvimwe zvitsigiro zvinopa kukoshesa kwakawanda pakuongorora kwehunyanzvi zvinoremekedzwa. Nepo kune rimwe divi, iwo ari kubhejera pane zviyero zvinofanirwa kuita zvirinani pane kune mamwe masheya kukosha. Nedzimwe musiyano wakakosha pakati peimwe neimwe nzira dzekudyara.
1 Mikana yebhizinesi: Enagás
2 Endesa mukutsvaga kwepamusoro pegore
3 Acciona: iyo Ibex 35 kushamisika
4 Solaria senge yekufungidzira sarudzo
5 Sabadell, achitarisa yuro yuniti
6 Kusahadzika kwaEnce
Mikana yebhizinesi: Enagás
Pasina kupokana, iyo gasi kambani yakanyorwa mune yakasarudzika indekisi yeSpanish equities ndeimwe yeanofarira kuverengerwa anotevera ekudyara portfolio. Imwe yekiyi dzekuzadzisa zvinangwa zvacho ichave yekuti inopa chiratidzo chesimba icho chinoputsa kuramba kwazvinoita parizvino, padyo padyo nematanho e26 euros mugove. Kana chokwadi ichi chikaitika, hapana mubvunzo kuti pakupedzisira pachave nekudhonza kumusoro kumusoro kunogona kutungamira kumatanho pamusoro pe 27 kana 28 euros. Ndokunge, neinenge 10% mune yayo mukana wekukoshesa.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti kukosha uku ndeimwe yeiyo inosimudzira mukati meIbex 35. Kunyangwe nenyaya yekuti mumwedzi yapfuura yakamisa kukwikwidza kwayo. Kusvika padanho rekugadzira kusahadzika pakati pevashambadzi vadiki nepakati avo vakasimudza kuti inguva yekudzora zvinzvimbo zvavo uye kunakirwa neyakawanikwa inogadzirwa kuburikidza nemwedzi gumi nembiri yekupedzisira yekutengesa. Uye zvakare, iyo ndeimwe yekuchengetedzeka iyo inogovera imwe yezvikamu zvakakwirira kwazvo mumusika wenyika. Nebhizimusi inofungidzirwa yekutenderedza 6.5% kuburikidza nemubhadharo wakatarwa uye unovimbiswa gore rega rega.
Endesa mukutsvaga kwepamusoro pegore
Mushure mekubatanidza zvinzvimbo zvako, iwe uri muchinzvimbo chekugadzira imwe yekukwevera yekusimudzira iyo inotora iwe kutokwira. Chiitiko ichi chinoitika nekuti chinodarika emahara mairi egore ari mu nhanho dze23, 30 euros pamugove. Dai zvaive nenzira iyi, hazvigone kutongwa kunze kwekuti mune mashoma anotevera zvinogona kukwira kusvika makumi maviri nemaviri euros. Neimwe yekuwedzera yekutambanudza iyo inofungisisa uye inogona kutora zvikamu zveEndesa kumatanho asingafungidzirwe kusvika makore mashoma apfuura. Kuve mune chero mamiriro ezvinhu imwe yemaitiro ayo anofanirwa kutorwa pane radar.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti iyi kukosha kwechikamu chemagetsi ndeimwe iyo inogovera a chikamu chakakura kwazvo muhurumende yenyika. Nekudzoka pane chengetedzo ingangoita 7% kuburikidza neye yakatemwa uye yakavimbiswa mubhadharo iri semi-pagore. Kupa chimbadzo chakakwira zvakanyanya kupfuura icho chinopihwa nezvose zvakagadziriswa mari yemari. Pakati pavo, yakatarwa-nguva bhangi dhipoziti kana yakakwira-mari maakaundi, ayo mune ese ari maviri mamiriro asingatombo kuzivisa kufarira kwe1% mune akanakisa kesi.
Acciona: iyo Ibex 35 kushamisika
Iyo yekuvandudza bhizinesi modhi yakapihwa nekambani yakanyorwa ndeimwe yezvinonyanya kukurudzira kuona kuti mitengo yayo inogona kukwira, zvirinani mukati memwedzi mishoma inotevera yegore rino. Kunyangwe pave paine imwe kuneta mukutenga zvinzvimbo semhedzisiro yeyakawandisa mamiriro mune kukosha uku. Kunyangwe zvakadaro, vaongorori vazhinji vezvemari vanofunga kuti ichine mukana wekudzokorodza mumadhijiti maviri. Mukati meiyo yakakwana isina chakasarudzika chiteshi uye isina kupera chimiro.
Izvo hazvingashamise kana kudhonza kutsva kwekutsvaga kuchikura kubva zvino zvichienda mberi. Zvingave zvinonakidza kwazvo kutora zvinzvimbo mune kukosha kuve mukati kana mamiriro aya akafanoonekwa nevanoongorora zvemari. Ichi chinhu chinofanirwa kutarisirwa kana uchigadzirisa kana ongorora nzvimbo dzekudyara. Kuedza kuwana kudzoka kwakakwirira kubva zvino zvichienda mberi. Chero zvazvingaitika, ndeye yakasarudzika yekuisa mupfungwa kukoshesesa capital yedu inowanikwa kune ma investments akaitwa muequities.
Solaria senge yekufungidzira sarudzo
Iyi diki kukosha nekuda kwemusika wayo capitalisation ndeimwe yedzimwe nzira dzinogona kupa yakanaka chinyorwa kana kungoti kushamisika mumwedzi iri kuuya. Kunyangwe ichizivikanwa neayo kunyanyisa kusagadzikana mukuchinja kwemitengo yavo. Nemusiyano wakakosha kwazvo pakati pemitengo yayo yepamusoro uye yepasi. Chii chinoita kuti ive inokodzera mashandiro ekutengesa ayo anoda ruzivo rwakawanda kubva kuvadiki vepakati nepakati. Hazvishamisi kuti hazvisi nyore kwazvo kushanda nemutengo wakaita seuyu watiri kutaura nezvake.
Ndichiri pane imwe, hazvigone kukanganwika kuti Solaria ndechimwe chekuchengetedzwa kwakakoshesa zvikuru mumakore maviri kana matatu apfuura. Nekuda kwekutarisirwa mune yayo bhizinesi modhi nevashambadzi uye izvo zvakagadzira izvo mumwedzi mishoma pane zvakatowanda kakapetwa katatu kukosha kwezvikamu zvavo muhomwe. Mune imwe yezviitiko zvinozivikanwa zvekuvandudzwa mumusika wemasheya uye izvo zvakakwezva huwandu hwakanaka hwevashambadzi vadiki nepakati vane hunyanzvi hwekudyara. Iko kwavanogona kuwana mari yakawanda mumwedzi mishoma, kunyangwe nekuvhiya uko njodzi dzave kugara dzichinonoka.
Sabadell, achitarisa yuro yuniti
Iyo imwe yehunhu hunogona kuve nerwendo rurefu mumisika yemari. Chero bedzi tsigiro yakakosha yazvino muyuniti yeyuro inoremekedzwa. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi hunhu uye kunyangwe kubva pakuona kwezvakakosha. Kwete pasina, iyo njodzi mukuita kwako Icho chinhu chinogona kudzoserwa mukuita kwaunogona kukudziridza neiyi kukosha inosanganisa iyo Ibex 35.
Asi kana iwe ukaremekedza aya mazinga mumitengo yako hapana mubvunzo kuti mukana wako wekudzokorora ungave wakakwira kupfuura mune mamwe makambani akanyorwa uye kunyanya mukati mebhengi chikamu. Mupfungwa iyi, mu yepakati nepakati vanogona kunyatsosvika maviri nehafu euros, inova iri nhanho yakakwana yekugadzirisa zvinzvimbo. Kunyangwe iyo yakaipa nguva iyo mabhanga ari kuenda kuburikidza neSpanish equities. Kunyanya, nemabhangi madiki nepakati nepakati, senge iyi, Bankia kana Bankinter.
Iyi ndiyo imwe kukosha iyo inogona kukwira kumusoro kana kukwira kwemutengo weputi kugutsikana. Hazvishamise kuti yakamira nekutungamira kuwedzerwa kweiyo nyika inosarudzika indekisi, Ibex 35, semhedzisiro yeiyo chivimbo chakamuka pakati pevashambadzi vadiki nepakati. Kunyangwe ichipesana nezvingaitika pamwe nenzvimbo dzayo dzainacho muPontevedra estuary. Kusvika padanho rekuti haigone kutongwa kunze kuti inofanirwa kuvharwa nekuda kwematambudziko ezvakatipoteredza. Mune ino kesi, mushonga chete ungave wekubuda munzvimbo dzawo nekukasira kumhanya. Pamberi pekudonha mumusika wemasheya iyo yaigona kugadzira.
Chero zvazvingava, yanga iri imwe yemafashoni makoshesano mumabhizimusi emunyika kubvira payakajoinha Ibex 35 makore maviri apfuura. Nekudzokorora uko kwasvika manhamba maviri uye izvo zvakatungamira kuchiri kuteverwa kwazvo nechikamu chikuru chevamiriri vemusika wemasheya. Iine dhinomineta rakajairika senge kusagadzikana mukuchinja kwemitengo yavo uye izvo zvakatungamira kunopfuura kuvhiringidzika kumwe pakati pechikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati. Kubva pane ino maonero, hapana imwe mhinduro kunze kwekunge wakanyatsoteerera kushanduka kwayo pamusika wemasheya. Nekuti ichokwadi kuti zvakare kukosha uko kwaunogona kurasikirwa nemari yakawanda mukuita kwakaitwa mazuva ano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » 6 mikana yebhizinesi pamusika weSpanish wemusika